पुष्पा’को हिन्दी डब नेपालमा रिलिज हुने भएको छ! कहिले रिलिज हुन्छ ? - संगालो न्यूज
पुष्पा’को हिन्दी डब नेपालमा रिलिज हुने भएको छ! कहिले रिलिज हुन्छ ?
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ११:१३Last Updated: ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ११:१३
मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा साउथका स्टारहरुको क्रेज बढ्दै गएपछि चलचित्र रिलिजलाई वितरकहरुले पनि महत्वपूर्ण रुपमा लिन थालेका छन् । कुनै समय साउथका स्टार रजनीकान्तको चलचित्र मात्र नेपाल भित्रिन्थ्यो ।
तर, अहिले साउथका अधिकांश स्टारहरुको चलचित्रले नेपाली बजारमा कब्जा जमाउन थालेका छन् । ‘बाहुबली, केजीएफ’ जस्ता चलचित्रले नेपालमा राम्रो कमाइ गरेपछि नेपाली वितरकहरु साउथका चलचित्र रिलिज गर्न उत्साहित भएका हुन्
तर, अहिले साउथका अधिकांश स्टारहरुको चलचित्रले नेपाली बजारमा कब्जा जमाउन थालेका छन् । ‘बाहुबली, केजीएफ’ जस्ता चलचित्रले नेपालमा राम्रो कमाइ गरेपछि नेपाली वितरकहरु साउथका चलचित्र रिलिज गर्न उत्साहित भएका हुन् ।
यसैबीच साउथ चलचित्र ‘पुष्पा’को हिन्दी डब नेपालमा रिलिज हुने भएको छ । पुस २ गतेबाट यो चलचित्र नेपालमा रिलिज हुने पक्का भएको छ ।
वितरक मनोज राठीले यो चलचित्रको अधिकार खरिद गरेको जानकारी दिए । सुकुमारको निर्देशनमा बनेको यो चलचित्रमा अल्लु अर्जुन, पुष्पा, रश्मीका मन्दन्नाको मुख्य भूमिका छ । रश्मीका प्रशंसकहरु पनि नेपालमा निक्कै छन् । यसैले बक्स अफिसमा यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने अपेक्षा वितरकको छ ।
मनोज राठी र उनको टिमले नेपाल भित्र्याएको बलिउड चलचित्र ‘सूर्यवंशी’ले बक्स अफिसमा धुम मच्चाएको थियो ।
बजारमा १०० ग्रामको १ हजार अमेरिकी डलरसम्म बिक्री…
धुर्मुस भन्छन् ‘ऋण लिएका व्यवसायीहरूको तारन्तार फोन…
हामी सँगै छौं, शारीरिक सम्बन्ध पनि प्रत्येक दिन…
बुवा मन्त्री बन्दा अमेरिकाबाट शृंखलाले पठाइन् यस्तो…